Epamusoro 8 TikTok Hacks ekukubatsira iwe kuwana mamwe Mafaro - Nhau dzeSocial Daily
Maitiro ekuvandudzwa nemutauro mutsva webhizinesi
Nhanganyaya: TikTok ndeyesocial media app iri kuwana mukurumbira nezuva rega rega. Kana usiri kuishandisa, unogona kunge uchinetseka kuti ndeyei. TikTok inobvumira vashandisi kugadzira uye kugovera mavhidhiyo mapfupi, uye app yave kunyanya kufarirwa nevachiri kuyaruka uye vechidiki vakuru. Kunyangwe pasina mashiripiti formula yekuwana matani ekuda pamavhidhiyo ako eTikTok, pane zvimwe zvinhu zvaunogona kuita kuti uwedzere mikana yako. Tarisa uone edu epamusoro 8 hacks kuti akubatsire iwe kuwana zvimwe zvekufarira paTikTok!
1. Shandisa maitiro nematambudziko sekukurudzira kumavhidhiyo ako:
Imwe yedzakanakisa nzira dzekuti uwedzere kufarira paTikTok mavhidhiyo ako kutora chikamu mune zvakakurumbira mafambiro nematambudziko. Vashandisi vanogona kuona nekuita nemavhidhiyo ari chikamu chechimwe chinhu chakakura kupfuura chavari kutofarira. Paunoshandisa maitiro uye zvinonetsa sekukurudzira kwemavhidhiyo ako, unowedzera mikana yako yekuonekwa nevateereri vakawanda, uchiwedzera nhamba. yema likes auchawana. Kana iwe uchida kuti mavhidhiyo ako aonekwe nevanhu vazhinji, unofanirwa kuve neshuwa kuti uri kushandisa mafambiro akakurumbira uye zvinonetsa sekukurudzira kwezviri mukati mako. Hazvireve kuti unofanira kukopa mavhidhiyo evamwe vanhu asi kuti uashandise senzvimbo yekusvetuka-svetuka kugadzira chimwe chinhu chitsva uye chepakutanga.
2. Funga nezve ruzha:
Chinhu chimwe chinoita kuti TikTok ive yakasarudzika maitiro ayo ekugadzirisa. Ruzha rwakangokosha sezvinoonekwa zveTikTok mavhidhiyo. Vashandise kune mukana wako nekugadzira nekuisa kwaunoita mavhidhiyo ako pamwechete. Ita shuwa kuti mavhidhiyo ako ane inonakidza uye inonakidza odhiyo inoda kubata pfungwa dzevanhu. Vazhinji vashandisi vanoona TikTok mavhidhiyo pasina ruzha, saka zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti mavhidhiyo ako achiri kuita, kunyangwe aine kana pasina odhiyo. Shandisa zvinobata pfungwa uye matauriro kuratidza zviri kuitika muvhidhiyo yako, kunyangwe vashandisi vasinganzwe ruzha. Paunoshandisa ruzha rwuri kufamba muvhidhiyo yako, inozoiswa muchikamu che "Inzwi" cheapp, zvinoreva kuti ichaonekwa nevanhu vazhinji.
3. Shandisa ma hashtag kuti uwedzere kusvika kwako:
Ma hashtag ekurudyi anogona kuita kuti vanhu vakawanda vaone vhidhiyo yako. Ita imwe tsvagiridzo kuti uone kuti ndeapi ma hashtag akapararira mu niche yako uye shandisa iwo mumavhidhiyo ako. Iwe unogona zvakare kushandisa TikTok's duet chimiro kuti ubatane nemumwe mushandisi uye svika kune vateereri vatsva. MaHashtag inzira huru yekuita kuti mavhidhiyo ako aonekwe nevanhu vazhinji. Paunoshandisa ma hashtag akakodzera, mavhidhiyo ako anozoonekwa mumafudze evashandisi vari kutevera iyo hashtag. Iyo inzira yakanaka yekusvika kune vateereri vatsva uye kuwana mamwe maonero uye kufarira pamavhidhiyo ako.
4. Geotag mavhidhiyo ako kuti uwedzere kuratidzwa:
Geotagging ivo inzira huru yekuita kuti vaonekwe nevanhu vari munharaunda yako. Paunotora mavhidhiyo ako, anooneka pamepu mukati meTikTok app. Vashandisi vanogona kuongorora mavhidhiyo kubva kumativi ese epasi, uye kana vakaswedera pedyo nekwaunogara, vanozokwanisa kuona mavhidhiyo ako. Iyo inzira yakanaka yekuwana mamwe maonero uye kufarira, kunyanya kana uri kuyedza kusvika kune veko vateereri. Paunoisa mavhidhiyo ako, anozoiswa pane "Ongorora" peji reapp yenzvimbo iyoyo. Ndiyo imwe yepamusoro tiktok mazano uye mazano kuti uwane mamwe maonero uye kufarira, kunyanya kana uri munzvimbo ine mukurumbira.
5. Bata pamwe nevamwe vashandisi:
Kudyidzana nevamwe vashandisi inzira huru yekuita kuti mavhidhiyo ako aonekwe nevanhu vazhinji. Paunenge uchishandira pamwe nevamwe, unogona kugovana mavhidhiyo emumwe nemumwe pamapeji ako akasiyana. Ichafumura vhidhiyo yako kune vateereri vatsva, uye vamwe vevaoni ivavo vangangofarira nekutevera peji rako. Iyo inzira yakanaka yekuendesa zita rako kunze uko uye kuwana vateveri vatsva. Paunodyidzana nemumwe munhu ane anotevera anotevera kwauri, vateveri vavo vanozoratidzwa kune zvako zvemukati uye zvinopesana. Iyo inzira yakanaka yekukura vateereri vako uye kuwana mafaro akawanda pamavhidhiyo ako.
6. Sarudza pikicha inoyevedza:
Kana vanhu vachipuruzira TikTok, ivo vanowanzo funga kuona kana kusaona vhidhiyo yakavakirwa pamufananidzo wechigunwe. Chigunwe chako ndicho chinhu chekutanga chinoonekwa nevanhu pavanosangana nevhidhiyo yako, saka zvakakosha kuve nechokwadi kuti inobata maziso. Iyo yakanaka thumbnail ichaita kuti vanhu vade kudzvanya pavhidhiyo yako uye voiona. Ita shuwa kuti thumbnail yako yakapenya uye ine ruvara, uye edza kusanganisira pedyo nechiso chako. Ita shuwa kuti thumbnail yako inoyevedza uye inodakadza, ichikurudzira vanhu kudzvanya pavhidhiyo yako. Unogona kushandisa Canva kana imwe online dhizaini chishandiso ku gadzira chigunwe chinokwezva maziso izvo zvichabata pfungwa.
7. Tumira panguva yakakodzera:
Nguva yezuva yaunotumira mavhidhiyo ako inogona kuita mutsauko mukuru mukuwanda kwekuda kwaunowana. Kana iwe uchida kuwana akawanda anofarirwa, zvakanaka kuti utumire mavhidhiyo ako kana vanhu vazhinji vari online uye vachipfuura nepakati pekudya kwavo. Nguva dzakanakisa dzekutumira paTikTok dziri pakati pevhiki manheru uye kupera kwevhiki. Edza nenguva dzakasiyana uye mazuva kuti uone kana iwe wawana zvakanyanya kubatikana. Nguva yezuva yaunotumira vhidhiyo yako inogona kuita mutsauko mukuru mukuwanda kwekuda kwainowana. Kana iwe uchida kusvika kune vakawanda vateereri, tumira apo vanhu vangangove vari panharembozha dzavo uye kupuruzira TikTok. Nguva dzakanakisa dzekutumira dziri mangwanani nemanheru, kutenderera 9 AM na9 PM. Nekudaro, zvakakosha kuti uedze nguva dzakasiyana kuti uone kuti chii chinonyatsoshanda iwe nevateereri vako.
8. Shandisa mazwi akakosha:
Makiyi akakosha paTikTok, senge chero imwe social media platform. Tsvagurudza yakakurumbira TikTok hashtag uye shandisa iwo mumavhidhiyo ako. Zvichabatsira mavhidhiyo ako kuoneka pane For You peji yevamwe vashandisi vanofarira nyaya dzakafanana newe. Kana iwe shandisa mazwi akakosha mumazita uye tsananguro dzemavhidhiyo ako, unogona kuoneka mumibairo yevanhu. Zvinoreva kuti vanhu vazhinji vachaona mavhidhiyo ako, zvichitungamira kune akawanda anofarira. Ita tsvagiridzo kuti uone kuti ndeapi mazwi akakosha anonyanya kufarirwa mu niche yako.
Mhedziso: Hezvo iwe unayo! Edu epamusoro 8 TikTok hacks ekukubatsira iwe kuwana mamwe mafaro. Nekutevera aya akareruka matipi, unogona kuwedzera mikana yako yekuwana akawanda mafaro pane ako TikTok mavhidhiyo. Neaya matipi, iwe unenge uri munzira yekuve TikTok superstar pasina nguva. Rangarira kugadzira, kunakidzwa, uye kuita nevateereri vako. Rombo rakanaka!
by SND Team 24 maawa apfuura 24 maawa apfuura